शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा आफू आउने डा. शेखर कोइरालाको दाबी – USNEPALNEWS.COM
शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा आफू आउने डा. शेखर कोइरालाको दाबी
by यूस नेपाल न्युज December 12, 2017
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको शर्मनाक हार हुनुका पछाडि धेरै कारण भएको बताएका छन् । अधिकांश नेताहरुले नेतृत्वको कमजोरीका कारण कांग्रेसले हारेको बताइरहँदा कोइरालाले भने कुनै एउटा कारणले मात्र पराजय भएको हुन नसक्ने बताए ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग कुरा गर्दै नेता कोइरालाले मुख्य कारण चाँहि पछिल्लो डेड वर्षभित्र कांग्रेसले गरेका केही अलोकप्रिय काम भएको बताए । दोस्रो कारण स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवार छनौट राम्रोसँग हुन नसक्नु रहेको कोइरालाको तर्क छ ।
“तेस्रो कारण भनेको वाम गठबन्धनले स्थीर सरकार दिन सक्छ भन्ने सन्देश जनतामा गयो ।” कोइरालाले थपे । त्यसैगरी लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रभावकारी बन्न नसक्दा कांग्रेस कमजोर बनेको कोइरालाको तर्क छ ।
६७५ भोट अन्तरले पराजित कोइरालाले आफ्नो क्षेत्रमा जनताले आफूलाई उत्साहपूर्वक मतदान गरेको बताए । तर कांग्रेसको आन्तरिक कारणले गर्दा आफूले चुनाव हारेको कोइरालाले बताए ।
“प्रदेश नम्बर क बाट कांग्रेसको उम्मेदवारले २ हजार भोटले जितेको छ । ख बाट तीन हजार भोटले जितेको छ । अनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार चाँही ६७५ भोट अन्तरले पराजित हुन्छ । त्यसको माने के हो ?” कोइरालाले प्रश्न गरे ।
प्रदेशसभामा जितेर प्रतिनिधिसभामा हारेको आफू मात्रै भएको भन्दै कोइरालाले आक्रोष पोखे ।
चुनाव हारे पनि आफ्नो आत्मबल नघटेको कोइरालाको तर्क छ । आफू पार्टीलाई अझ मजबुत बनाएर अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताए ।
कोइरालाले पार्टीको हार बारे समिक्षा गर्नका लागि केन्द्रिय समितिको बैठक र महासमितिको बैठक तत्काल डाक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
दुवै समितिको बैठकले केही निष्कर्ष निकाल्ने कोइरालाको तर्क छ ।
विगतमा कांग्रेसले मतदातालाई नै क्रियाशील सदस्य बनाएर गल्ती गरेको कोइरालाले बताए । क्रियाशील सदस्यको आडमा महासमिति सदस्य बनाइएको कोइरालाले बताए । यस्ता कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजिनामा दिनुपर्ने हो भन्ने ऋषि धमलाको प्रश्नमा कोइरालाले कुनै एक व्यक्तिले मात्र नभै सबैले हारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
तर महासमिति र केन्द्रिय समितिको बैठक नबसी कसैले राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको कोइरालाको तर्क छ ।
नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सभापति शेरबहादुर देउवा आफैले सोच्नुपर्ने उनको भनाई छ । तर यही अवस्था हो भने अहिलेको नेतृत्वले कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन नसक्ने कोइरालाले बताए ।
शेरबहादुर देउवाको विकल्पमा आफू आउन सक्ने कोइरालाको दाबी छ । कुनै पनि नेतृत्व निर्विकल्प नहुने भन्दै उनले अरु कोही पनि कांग्रेसको नेतृत्व लिन सक्षम रहेको उनको भनाई छ ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशतर्फका उम्मेदवार जिताउनु नै आफ्नो सफलता भएको भन्दै कोइरालाले आफू सक्षम रहेको दाबी गरे ।
अब कांग्रेस सुध्रिएन भने नेतृत्व परिवर्तन स्वतः हुने उनले बताए ।
एनआरएन अमेरिकाको चुनावमा अध्यक्ष अोलीको नाम मुछिएपछि एमालेको अापत्ति
by यूस नेपाल न्युज	 July 26, 2017
ओलीले मोदीको स्वागत गर्न राष्ट्रबाद विर्सिए : सीपी गजुरेल
by यूस नेपाल न्युज	 June 3, 2018